अन्तत : सरिता गिरीको सांसद पद च’ट ! राजनीतिको दुनियाँ पनि समाप्त,
काठमाडाैँ । समाजवादी पार्टीकी नेतृ सरिता गिरीको सांसद पद च’ट हुने भएको छ । पार्टीको ह्वी’प विपरित काम गरेकाले उनको सांसद पद च’ट हुन लागेको हो । समाजवादी पार्टीले गिरीको राजनीति पनि समाप्त पार्दै साधारण सदस्य समेत नरहने गरी का’रबाही गर्ने भएको छ । गिरीमाथि का’रबा’हीको प्रक्रया सुरू गरिएको समाजवादी पार्टीका नेताले बताएका छन ।
समाजवादीका नेताहरू उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई काठमाडाैँ फर्के लगत्तै गिरी माथिको का’रबाही अघि बढ्नेछ । यादव विराटनगर र भट्टराइ गोरखामा रहेका छन । संविधानको धारा ८९ को (ङ) मा जुन दलको उम्मेदवार भई प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेको हो, त्यस्तो दलले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा सांसद पद निलम्वन हुने का’नुनी प्रावधान रहेको छ । गिरी खस आर्यको कोटाबाट समानुपातिक कोटामा सांसद बनेकी थिइन ।
नेपाली स्वभिमानवि’रूद्ध उभिएकी गिरीले ग’लत अ’भिव्यक्ति दिएकी थिइन भने नेपाली भूमि भारतकै रहेको भन्दै सरकारले राष्ट्रिय एकताका साथ प्रस्तुत गरेको संशोधनका वि’रूद्धमा संशोधन प्रस्ताव ल्याएकी थिइन । लिम्पियाधुरा सहितको भूगोल समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी भएपछि गरिएको संविधान संशोधनमा गिरीले फरक मत राखेकी थिइन् ।